Barruu olaantoo ykn gadaantoo keessa dhangeessuu Kallattiin fayyadamuu dandeessa.Akkasumas addaan fageenya barruu goodayya olaantoo ykn gadaantoo waliin wal bira qabuun mijeessuu dandeessa ykn handaara olaantoo ykn gadaantoof fayyadami.
Dhangii - Fuulaa filun fi caancala Irraantoo ykn caancala Jalaantoo .
Dirqalaalee addaan fageenyaa itti fayyadamu barbaaddu qindeessi.
Olaantoo fi jalaantoof handaara ykn gaddiidduu dabaluuf,Dabalata cuqaasi. Qaaqni Handara/Duubbee ni banama.
Title is: Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu